I-villa yasengadini yokunethezeka, ichibi, ukubukwa okuhle, eduze nolwandle
Leli yi-villa elihle elinezinsiza eziningi futhi lilala izivakashi ezingaba ngu-6. Indawo inokubukwa okuhle, endaweni yokulondoloza imvelo engamahektha angu-3.5 yezihlahla zikaphayini, amasimu ezithelo nezingadi. Isikhala sinothando kakhulu, sithule futhi sinesango. Thola ukufinyelela ku-swimming pool enkulu yangasese enakekelwa kahle futhi efudunyezwayo (ubukhulu obungu-30º njengoba kuyalelwa ochwepheshe) enophahla olukhiphekayo. Ibala lokudlala elikhethekile lezingane ezinemijiko nendawo ye-basketball. 7-min eduze kwamabhishi e-Aldeio do Meco kanye ne-Cabo Espichel.
Indlu enamakamelo ama-2 (+umbhede wosofa; imibhede engu-3 isiyonke) enamagumbi okugezela ahlukene (negumbi eliphakathi nendawo elihlukanisa zombili izindawo zokuhlala) nekhishi, elinezinsiza eziningi, indawo yokubhukuda enkulu, inkundla yokudlala yezingane, indawo yokupaka yangasese, i-WiFi , I-BBQ, etholakala e-Fornos, e-Caixas, endaweni yokulondoloza izihlahla zikaphayini eduze kwase-Cabo Espichel nase-Lisbon.
Indawo yokudlela eyinhloko iyindawo embozwe exhunywe ku-villa, futhi indawo yokudlela eyengeziwe itholakala ekamelweni elikhulu.
Indawo yangasese inesango futhi inamahektha ayi-3.5 ezingadi ezinhle, amasimu ezithelo nezinkuni.
Leli yikhaya elihle lamaholide lezithandani eziningi noma umndeni ofuna ukubaleka kwezothando, abahamba emicimbini noma abantu bendawo abafuna ukuphumula esiphithiphithini sedolobha noma bafune indawo ephephile nethule.
Indlu evalekile iyimizuzu eyi-7 kuphela ukusuka emabhishi adumile e-Aldeia do Meco.
Ichibi lingashiswa futhi lisetshenziswe nasezikhathini ezibandayo, ngezinga lokushisa eliphakeme lama-degree angama-30 njengoba belulekwa ochwepheshe.
I-WiFi, i-cableTV kanye nemishini ye-BBQ ifakiwe.
I-crib nesihlalo esiphezulu kunganikezwa futhi uma ucela.
Isevisi yokuhlanza iyatholakala (imali eyengeziwe).
Sicela usithinte kusengaphambili uma ufuna ukuletha izihambeli ezengeziwe.
Kunezindawo eziningi zokudlela ezinhle ezinokudla kwasolwandle okusha, i-Cabo Espichel cliff yokubukwa kwe-panoramic olwandle, idolobha laseSesimbra, i-Azeitao (yoshizi newayini) nokunye - vele ubuze ukuthi yini ofuna ukuyenza futhi siyajabula ukukusiza! :)
Sizoba nomuntu ozokuhlola ukungena nokuphuma futhi akunikeze usizo lapho kudingeka. Vele usibuze ukuthi yini ofuna ukuyenza futhi singasiza!